Wasiirka Amniga Jubbaland oo Madaxweyne Farmaajo ugu baaqay in uu is casilo - Awdinle Online
Wasiirka Amniga Jubbaland oo Madaxweyne Farmaajo ugu baaqay in uu is casilo
Wasiirka Amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Janan oo boqolaal askari kula hadlaayay duleedka degmada Beledxaawo ayaa ugu baaqay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyaha NISA in ay faragalinta ka daayaan gobolka Gedo.
Waxaa uu sheegay in maalmihii lasoo dhaafay dowladda Soomaaliya degmooyinka gobolka Gedo ay diyaarado ku keyntay ciidamo ay sheegtay in ay yihiin kuwo la dagaallamaya Kenya laakiin u jeedada laga leeyahay ay tahay in lagu caburiyo shacabka Gedo.
Wasiir Janan ayaa sheegay in wixii dhibaato ah oo ka dhasha ciidankaas ay mas’uuliyadooda qaadi doonaan Madaxweyne Farmaajo oo sheegay in meeshii uu degaan ahaan uu kasoo jeeday uu ciidamo ku qabsanaayo.
Ugu dambeyntii waxaa uu ugu baaqay Madaxweynaha in uu iscasilo, oo uu qaato talooyinka uga imaanaya bulshada Soomaaliyeed si uusan dalku u burburin.
“Farmaajo ilma adeer baan nahay waxaan kula talinayaa in uu is casilo oo dalka dhaafo qaatana talada musharixiinta in dalka laga qabtana kaalin ayaan ka qaadanayaa aniga iyo ciidankeyga” ayuu yiri wasiir Janan.
Previous articleMidowga Musharixiinta oo ka hadlay qorsho ay wadaan Deni & Qoor Qoor
Next articleCiidanka Haramcad oo la wareegay Ammaanka Matabaan